Nyefee Music si iPad ka iPod Mfe
> Resource> iPad> Olee Otú Ị Pụrụ Nyefee Music si iPad ka iPod
Nwere ọtụtụ ndị mara mma songs on iPad na ike na-eche nyefee gị iPod, na-ekwu iPod aka 5, nke mere na ị na-enwe ike ịnụ ụtọ music ke laa. Mgbe niile, iPad bụ obere mfe na-adaba adaba na-karịa ihe iPod, mgbe na-ewere size echiche. Ebe a anyị na-ewebata unu abụọ bara uru ngwaọrụ-enyere gị nyefee music ka iPod si iPad. Otu bụ Wondershare TunesGo, nke bụ akpan iji iPad ka iPod transfer ngwá ọrụ. Ọ na-enyere ị jikwaa music, videos, photos na ndị ọzọ data na gị iPod, iPhone na iPad. The ọzọ ngwá ọrụ bụ Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Dị ka a otu-click ekwentị na table transfer ngwá ọrụ, ọ na-enye ị nyefee music n'etiti iPad na iPod ozugbo.
Ngwọta 1: Copy music si iPad ka iPod na TunesGo
Ngwọta 2: Nyefee music si iPad ka iPod na MobileTrans na 1 click
Wondershare TunesGo mara maka ya elu àgwà na kediegwu atụmatụ. Na ya aka, ị nwere ike nke na-music si iPad ka iPod na naanị 3 clicks. Ọzọkwa, ọ na Nyefe songs si iPad, iPod na iPhone ka iTunes kọmputa, na Anglịkan. Download free ikpe mbipute a usoro. Soro nzọụkwụ n'okpuru iji nweta music si iPad ka iPod.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad na iPod na kọmputa
Na mbụ, wụnye na-agba ọsọ a usoro na kọmputa gị. Jikọọ gị iPad na iPod na kọmputa n'otu oge. TunesGo ga chọpụta ha na-akpaghị aka mgbe ha na-ejikọrọ. Mgbe ahụ, ma gị iPad na iPod ga-egosipụta ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. otú nyefee music si iPad ka iPod
Na-ekpe ndekọ osisi, n'okpuru gị iPad Atiya, pịa "Media" iji bugote media window. Pịa "Music" n'elu akara. Wee họrọ songs ị chọrọ mbupụ na pịa triangle n'okpuru "Export ka". Na ya esiri-ala menu, họrọ mbupụ gị iPod.
Cheta na: TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọtụtụ iPads na iPods na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 5 & iOS 6, gụnyere iPad ikuku, iPad Obere, iPad na Retina ngosi na iPod aka 5. Ebe a, ị nwere ike nweta dum akwado iPad na iPods.
Ọ ga-ewe gị ole na ole sekọnd idetuo music si iPad ka iPod. Jide n'aka na ma gị iPad na iPod jikọọ oge niile. Mgbe music ebufe-abịa na njedebe, i nwere ike na-elele dị songs site na ịpị "Media" n'okpuru gị iPod Atiya na mgbe ahụ na ịpị "Music".
Download TunesGo na-akpali music si iPad ka iPod.
Wondershare MobileTrans Ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac na-akpan e ekwentị na ekwentị na mbadamba data transfer ngwá ọrụ. Ọ na-akwado na-ebufe music si iPad ka iPod na 1 Pịa.
Download MobileTrans na nwere agbalị!
Cheta na: MobileTrans akwado iPod na iPad na-agba ọsọ iOS 9 / 7/8/6/5. Lee ndị na-akwado iPods na iPad site MobileTrans.
Ebe ọ bụ na Windows na Mac version ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ, ebe a, m dị nnọọ na-Windows version dị ka a na-agbalị
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori MobileTrans
Nke mbụ niile, wụnye na mgbe ahụ ẹkedori MobileTrans na kọmputa gị. Mgbe ahụ, bụ isi window-egosi dị ka foto dị n'okpuru ebe. Pịa Malite.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na iPad na kọmputa na USB cables
Jikọọ ma gị iPod na iPad na kọmputa na USB cables. MobileTrans Ga ngwa ngwa ịchọpụta na-egosi ha na isi window. Na ala nri akuku, nne Mmetụta anya Doro Anya data tupu oyiri, na music na gị iPod ga-ewepụ ịzọpụta iPad music. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ime ya, ka ọ bụ naanị ya.
Cheta na: Site na ịpị tụgharịa, ị nwere ike ịgbanwe ebe gị iPad na iPod.
Nzọụkwụ 3. Paghaa music si iPad ka iPod
Site na ndabara, music, photos, videos, kalenda, iMessages na kọntaktị na niile enyocha. Iji nyefee music, ị kwesịrị ị na uncheck kọntaktị, videos na photos. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Jide n'aka gị iPad na iPod jikọọ oge niile. Mgbe ebufe dị n'elu, ị nwere ike pịa OK.
Download MobileTrans nyefee music si iPad ka iPod ugbu a!
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad tupu Imelite ka iOS 8